YouTube Muqaal - Samee cajiib Photo Muqaal ah ee YouTube
> Resource > YouTube > Sida loo sameeyo cajiib Photo Muqaal ah ee YouTube
Sida loo noqon photos galay video slideshow music soo jeeda oo iyaga wadaagaan on YouTube? Halkan waa hab in ay ku tusaan sida loo sameeyo YouTube slideshow oo leh qaababka movie xirfadeed. No xirfadaha kombiyuutarka adag ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale, waxaa jira Hababka movie yaab leh oo aad sawiro weli nolosha isla keeni kartaa, taas oo suurto gal ah in la wadaagto sheekada sawirkaaga ee YouTube slideshow horyalka Talyaaniga, isagoo iskibrin. The sare loo qiimeeyo ee Wondershare DVD Muqaal dhise waxaa sare halkan talinayaa.
1 Photos Input u YouTube Photo Muqaal
Ka dib markii socda gaare slideshow this, doortaan "Standard Mode". Markaas jiidi & jiidi aad sawiro jecel in Board Story ama guji "Add Faylal ay" si ay u aqbasho.
2 Dooro Styles Movie Best u YouTube Photo Muqaal
Tag ah "shakhsiyeeyo" tab. Guji "Music" in ay ku daraan music soo jeeda, waxa kale oo aad ku dari kartaa dhawaaq ama diiwaankaaga gaar ah adigoo gujinaya "Voice ka badan". Markaas Kulanka Xiisaha Leh dhaceen Hababka movie ugu horeysay oo click double ama jiita & hoos u Hababka aad soo xulay Gudiga Story ah. Iyadoo 480+ Hababka filim kartoon-urursiga in, samaynta slideshow sawir loogu talogalay YouTube way fududahay. Waa maxay dheeraad ah, software waxaad kaloo ka heleysaa Hababka theme kala duwan ee kala duwan sida arooska, caruurta iyo filim oo la kulmay aad dalbaday gaar ah.
In tab this, waxa kale oo aad ku dari kartaa qaar ka mid ah xubno la jeclaysto si aad YouTube sawir slideshow dheeraad ah oo qosol badan iyo firfircooni leh. Tusaale ahaan, waxaad riixi kartaa "Intro / Credit" in lagu daro filimada Intro / Credit qurux badan oo dadka siin Aragtideyda ugu horeysa qoto dheer. Waxa kale oo aad ku dari kartaa macluumaad filim aad, sida horyaalka, agaasimaha, la shubay, iwm, oo wuxuu qotomiyey saamaynta qoraalka sida style filimka. Oo kuwan oo dhan filimka slideshow dhan qaab Hollywood noqon doonaa.
3 Calan Output ee YouTube Photo Muqaal
Ka dib marka aad ku eegaan slideshowand sawir oo dhan dareemaan ku qanacsanayn saameynta, dooro "Abuur" tab iyo guji "Share in YouTube". Waxaad ku qortaa account YouTube iyo password, magacaabi slideshow sawir aad iyo qori sharaxaad, ka dibna riix "naadiya". In yar ilbiriqsi, slideshow photo loo geliyaan doonaan in ay si toos ah YouTube.
Qabtay. Waa wakhti ay ku weerarkii aad YouTube muujinaysaa in saaxiibadaa iyo qoyskaaga. Hadda bilaabaan samaynta kuu gaar ah slideshow YouTube!